#တစ်ရာတန် တစ်ရွက်အောက်သို့ ပြုတ်ကျနေသည်။ ထိုကျနေသော တစ်ရာတန်ကို သူတို့မြင်လျှင် ဤသို့ ရေးကြပေလိမ့်မည်။ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / #တစ်ရာတန် တစ်ရွက်အောက်သို့ ပြုတ်ကျနေသည်။ ထိုကျနေသော တစ်ရာတန်ကို သူတို့မြင်လျှင် ဤသို့ ရေးကြပေလိမ့်မည်။
#တစ်ရာတန် တစ်ရွက်အောက်သို့ ပြုတ်ကျနေသည်။ ထိုကျနေသော တစ်ရာတန်ကို သူတို့မြင်လျှင် ဤသို့ ရေးကြပေလိမ့်မည်။
Apann Pyay 3:48 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
တစ်ရာတန်တစ်ရွက်ပြုတ်ကျရှာ ကျုပ်ဘ၀မှာ မကောက်သေး
လမ်းပေါ်မှာကျ ၊ တစ်ရာဘ၀မှာ
ဘယ်သူမကောက် ၊ လေလွင့်ပျောက်မည်
မိုးရေလည်းစို ၊ ပျောက်ပျက်အိုသည်
အိုသင်္ခါရ ၊ ထိုဘ၀တည်း။
ပိုက်ဆံမရှိသောအချိန် တစ်ရာတန်ကိုတွေ့လေသည်။ ကောက်ရန် ကုန်းလိုက်စဉ် လေတစ်ချက်အဝေ့မှာ တစ်ရာတန်လွင့်သွားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမပြုမိ။ တစ်ရာတန်ကိုသာ အာရုံစိုက်နေချိန် ထိုတစ်ရာတန်မှာ ကောက်မည်လုပ်လိုက် လေတိုက်လိုက် ကောက်မည်လုပ်လိုက် လေတိုက်လိုက်နှင့် တစ်ရွေ့ရွေ့လွင့်မျောလေတော့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဒီလူဘာလဲ ဟုကြည့်သည်။ မောင်ရဲဝင်းစိတ်မ၀င်စား။ သူစိတ်ဝင်စားတာ တစ်ရာတန်။ နောက်ဆုံး၌လေငြိမ်သွားချိန် ပြန်ကောက်ရန်ပြင်လိုက်ရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ခြေထောက်ပေါ်ရောက်နေသည်။ ကောက်ကာနီးကုန်းလိုက်ရင်း မော့ကြည့်လိုက်ရာ မကြည်ပြာဖြစ်နေတော့သည်။ သွားပြီ….။
တစ်နေ့သ၌ကျွန်ုပ်သည် ပျင်းပျင်းရှိ ရေခဲတောင်ဆေးလိပ်ကို သေသပ်ကျစွာဖွာပြီးသကာလ လမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့သည်။ ထိုအချိန်၌ လမ်းမထက်တွင် တစ်ရာတန် ခပ်နွမ်းနွမ်းတစ်ရွက်ကျနေသည်။ ထိုတရာတန်အား မကောက်သေးဘဲ ရှေ့ကကြည့်နေသည်။ ထို့မှတဖန် အားမရသေး ဘေးကထပ်ကြည့်ပြန်သည်။ အားရပါးရကြည့်ရှုပြီးသကာလ ကောက်ယူရန် ဘိလပ်မင်းသား စတိုင်ဖြင့် ကုန်းလိုက်စဉ်တွင် တခြားသူကောက်သွားလေသည်
တစ်ရာတန်တစ်ရွက်တွင် ကျိန်စာအပြည့်ရေးထိုးထားလေသည်။ ထိုတစ်ရာတန်ကို ကောက်မိသူမှာ ၁၀ရက်အတွင်း အသေဆိုးဖြင့်သေပေလိမ့်မည်။ သချိုင်းကုန်းတွင် အစီအမံများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တစ်ရာတန်ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ငါးဆယ်ခန့်က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ရာတန်ကို ကောက်ယူမိပြီးသေဆုံးသူပေါင်း ၁၂၀ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများ၏ ၀ိညာန်များလည်း ထိုပိုက်ဆံတွင်ကိန်းအောင်းနေလေသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာတောင့်တောင့်တင်းတင်း ဖြင့် နီရဲပြီး ပြတ်သားသောနှုတ်ခမ်းအစုံဖြင့် ယောကျာ်းပီသလှစွာသောနီးသွေးသည် ရှမ်ဗဲလားတွင် သစ်ခွနက်ရှာရန်ထွက်လာခိုက် လွန်စွာအိုမင်းလှပြီဖြစ်သော အဖိုးအိုကြီးတစ်ဦးနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာတောင့်တင်းပြီး ဖြူဖွေးချောမောလှသည့် မိန်းမပျိုတစ်ဦးတို့သည် ရှမ်ဗဲလားသို့သွားရာလမ်းတွင် တစ်ရာတန်တစ်ရွက်ကို ကောက်ရန်ပြင်နေသည်။ အမှန်စစ်စစ်မှာ ထိုတစ်ရာတန်တွင် သစ်ခွနက်ရှိမည့်နေရာသို့ သွားရန် မြေပုံရေးထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
အခြေနေမဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ မယောင်မလည် ရောက်လာသော ကောင်လေးတစ်ယောက်။ သူက မိမရှိဖမရှိ တစ်ကောင်ကြွက်။ အလုပ်လုပ်ရင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် စားပွဲထိုးနေရပြီး တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ခန့်သာရလေသည်။ အလုပ်ပါးခိုက် လက်ဖက်ရည်ပါဆယ် သွားပို့စဉ် လမ်း၌ တရာတန်တစ်ရွက်ကို မြင်၍ ကောက်ရန် ပြင်ရာ နောက်ဆုံးပေါ်ဇိမ်ခံကားပေါ်မှာ ဆေးကျောင်းတက်နေသော ရွှေတောင်ကြားတွင် နေပြီး လွန်စွာစမတ်ကျသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ရေဗွက်ကို ကားဖြတ်ဖြတ်မောင်းရာ သူ့ကိုဗွက်များစင်သွားသော်လည်း ကားကိုမရပ်ဘဲ ထွက်သွားလေသည်။ ကားနံပါတ်ကို သူ့စိတ်ထဲတွင် အလွတ်ကျက်လိုက်မိသည်။ AA-786969 ။
ကျတော်တို့ တစ်ရာတန်ဟိုမှာတွေ့တယ်။ မကောက်ရဘူး။ လူငယ်တွေဆိုတာ အမြင့်ကိုတက်လှမ်းမှာဖြစ်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းထားရမယ်။ အချောင်မခိုရဘူး။ နည်းပညာမြင့်လာတဲ့ ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းကောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ လုပ်အားခနဲ့ရတာကိုယူမှ ကြီးပွားတိုးတက်ပြီး ထိပ်ဆုံးရောက်နိုင်မယ်။
ကျမတို့မိန်းမသားတွေရဲ့ ရဲရင့်တည်ကြည်မှုက အောက်သို့ကျလျက်ရှိသော တစ်ရာတန်ကိုပင်အမှုမထားချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုတစ်ရာတန်မှာ ကျမတို့ရပ်တည်မှုနှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတရားကို ခြိမ်းခြောက်မည့် ငွေစက္ကူတစ်ရွက်လည်း ဖြစ်နိုင်သေးသည်။
ရည်းစားဟောင်းဆိုတာ အောက်မှာကျနေတဲ့ တစ်ရာတန်တစ်ရွက်လိုပဲ တန်ဖိုးမရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ကောက်ချင်မိတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်နေသား။
မိုးတွေရေတွေထဲ တစ်ရာတန် အာခံ ငါ့ကိုလာကြံ ကာပြန် ပမာထန် မကောက်တော့ဘူး ဘေးက ဘာအသံညာအသံ လာပြန်ပြောမှာဆိုးလို့ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်ငါပြန်မယ် မကျေနပ်ဖေ့ဘုတ်ပေါ်စာချန် မင်းနေတဲ့ရွာပြန်။
အိုးဝူးဝို ရေးရေ့ ရေးရေ့ တစ်ရာတန် အိုးအိုး ၀ူးဝူး ရေ့ရေ့ ရေးရေးရေ့ တစ်ရာတန် ရေးရေးရေ့ တွေ့တယ် ၀ိုးဝူးဝို အွန်းဟာာ ဟာာာ ရေ့ တစ်ရာတန် တွေ့တယ် ၀ိုးဝူးဝို့ဝို့ ရေးအေးဟေးဟေး ဟားဟားရေး ဝေးဟေးဟေး
လမ်းမှာတစ်ရာတန်တစ်ရွက်တွေ့တယ်။ ပိုက်ဆံကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ကျော် ဟိုဘ၀တုန်းက ရည်းစားဟောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပိုက်ဆံဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိတယ်။ စာတွေလည်းပါတယ်။ ကျိန်စာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဟိုက်…. တစ်ရာတန်တစ်ရွက်ဟ.. ဒီတစ်ရာနဲ့ဆို ဇေ တစ်ပတ်လောက်သောက်လိုက်ရ သိပ်ကောင်းမှာပဲ .. လာလေရော့ ..
ဟာ… တစ်ရာတန်တစ်ရွက် ဟီးဟီးဟီးဟီးဟီးဟီး တစ်ရာတန်ကြီး ဟားဟားဟာားဟားဟားဟားဟား တစ်ရာတန်ကြီးကွာ ဟီးးဟီးးဟီးးဟီးးး လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ် ငိငိငိငိ သူ့ဖာသာသူနေတဲ့ တစ်ရာတန်က လမ်းပေါ်ရောက်လာတယ် ဟေးဟေးဟေး ဟားဟားဟား အသေရီရတယ်ဟေ့ တစ်ရာတန်ကြီးလမ်းပေါ်ရောက်နေသဟ ဟားဟားဟားဟား
ဒီတစ်ရာတန်က ငါ့ကိုသွေးတိုးလာစမ်းနေတာဟ။ဂေ့ .. အမယ် မင်းပဲငါ့ကို ဆွဲဆောင်မလား ငါပဲ သိက္ခာအကျခံပြီးကောက်မလား ဒီတညလုံးမင်းနဲ့ ငါပြိုင်မယ်။ တွေ့ပြီလေ။
လမ်းမှာတစ်ရာတန်တစ်ရွက်တွေ့လို့ ပိုင်ရှင်ကို ရှာပြီးပြန်ပေးခဲ့တယ်။ သာဓုခေါ်ပေးကြပါရှန်။
လမ်းတွင်ပိုက်ဆံများပြုတ်ကျနေ ဟု အစချီကာ မူဗီတင်လိုက်ပြီး ပြုတ်ကျနေသော တစ်ရာတန်တစ်ရွက်ကို အဆုံးသတ်ရိုက်ပြပေလိမ့်မည်။
ငါ့ဘ၀က တစ်ရာတန်တစ်ရွက်လိုကာ တန်ဖိုးမဲ့တာတောင် ငါ့ကိုအမြဲရန်ရှာတတ်သလိုများ ဖြစ်နေရင် ကံကြမ္မာရဟတ်ပြန်လည်လာမှ မင်း… ဖန်တစ်ရာအတွက်တွေး…. တကယ်တော့ကျတော်တို့က ကြင်ဖက်တွေပါဗျာ သူမကမနေနိုင် လင်ထွက်ကာရှာ ငါကို မမြင်တတ်တာများ ခုတော့ နင်တာ့တာပြ …။
တစ်ရာတန်တစ်ရွက် ကောက်လည်းကောက်ချင်တယ် သူများမြင်ပြီးရီမှာလည်းကြောက်တယ်
ဆက်ပြောစမ်းပါဦး တစ်ရာတန်တစ်ရွက်က ဘက်စ်ကားစီးရင် အသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းလေး
ကျတော့်မှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ် တစ်ရာတွေအများကြီး ကောက်တွေ့စေရမယ်။
တစ်ရာတန်ကိုတောင် လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အတော်ပျောက်ဆုံးနေပြီ။ ဒီလိုတစ်ရာတန်ဟာ အရင်တုန်းက ဘယ်သူမှ ပစ်မချခဲ့ဘူး။ ဒါမျိုးပစ်ချတယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီအမည်ခံပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ ဒါမျိုးလက်ခံလို့မရဘူး။
ငါတို့အရိုးစည်းရိုးထိုး Blah Blah
#တရာတန် #တစ်ရွက် #လမ်း #ကောက်ရ #ပျော်နေ #မုန့်ဝယ် #စား #ကောင်း #တစ်ယောက်တည်း
စမီးတရာတန်တရွက်ကောက်ရလို့ နောက်တခါ တစ်သောင်းတန်ကောက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွား မတောင်းပေးရင် unမှာနော် realလေးတွေဆိုမန့်ကြ။ မွမွ
ဒီတစ်ရာတန်ကို ရှယ်ပြီး လိုချင်သောပမာဏရေးပါ။ တလအတွင်းဝင်မည် ။ မှတ်ချက် သိန်းတစ်ရာမကျော်ရ။
တကယ်​​တော့ ၁ နှစ်​ရှိပြီး ဘာမှ မတိုးတက်​တာလဲ မ​ဟြေနဲ့​လေ .​ကြည့်​ပါလား . အခုလို ၁၀၀ တန်​ကျတာ​တောင်​ ဘယ်​သူမှမ​ကောက်​ကြဘူး .ဒါဟာလဲ အရင်​အစိုးရမ​ကောင်းခဲ့လို့ ကျတာပဲ. ဒါမဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့အ​နေနဲ့ ၃ လအတွင်း ရ​အောင်​​ကောက်​ပြပါမယ်​ . ဒီထက်​မြန်​မြန်​​ကောက်​ပြနိုင်​မယ့်​ လူရှိရင်​ သူတုိ့ကို​ကောက်​ခွင့်​​ပေးသွားမှာပါ .
Credit - unknow ᠌᠌᠌
#တဈရာတနျ တဈရှကျအောကျသို့ ပွုတျကနြသေညျ။ ထိုကနြသေော တဈရာတနျကို သူတို့မွငျလြှငျ ဤသို့ ရေးကွပလေိမျ့မညျ။
တဈရာတနျတဈရှကျပွုတျကရြှာ ကြုပျဘဝမှာ မကောကျသေး
လမျးပျေါမှာကြ ၊ တဈရာဘဝမှာ
ဘယျသူမကောကျ ၊ လလှေငျ့ပြောကျမညျ
မိုးရလေညျးစို ၊ ပြောကျပကျြအိုသညျ
အိုသင်ျခါရ ၊ ထိုဘဝတညျး။
ပိုကျဆံမရှိသောအခြိနျ တဈရာတနျကိုတှလေ့သေညျ။ ကောကျရနျ ကုနျးလိုကျစဉျ လတေဈခကျြအဝမှေ့ာ တဈရာတနျလှငျ့သှားသညျ။ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမပွုမိ။ တဈရာတနျကိုသာ အာရုံစိုကျနခြေိနျ ထိုတဈရာတနျမှာ ကောကျမညျလုပျလိုကျ လတေိုကျလိုကျ ကောကျမညျလုပျလိုကျ လတေိုကျလိုကျနှငျ့ တဈရှရှေ့လှေ့ငျ့မြောလတေော့သညျ။ ပတျဝနျးကငျြက ဒီလူဘာလဲ ဟုကွညျ့သညျ။ မောငျရဲဝငျးစိတျမဝငျစား။ သူစိတျဝငျစားတာ တဈရာတနျ။ နောကျဆုံး၌လငွေိမျသှားခြိနျ ပွနျကောကျရနျပွငျလိုကျရာ အမြိုးသမီးတဈဦး၏ ခွထေောကျပျေါရောကျနသေညျ။ ကောကျကာနီးကုနျးလိုကျရငျး မော့ကွညျ့လိုကျရာ မကွညျပွာဖွဈနတေော့သညျ။ သှားပွီ….။
တဈနသေ့၌ကြှနျုပျသညျ ပငျြးပငျြးရှိ ရခေဲတောငျဆေးလိပျကို သသေပျကစြှာဖှာပွီးသကာလ လမျးလြှောကျထှကျလာတော့သညျ။ ထိုအခြိနျ၌ လမျးမထကျတှငျ တဈရာတနျ ခပျနှမျးနှမျးတဈရှကျကနြသေညျ။ ထိုတရာတနျအား မကောကျသေးဘဲ ရှကေ့ကွညျ့နသေညျ။ ထို့မှတဖနျ အားမရသေး ဘေးကထပျကွညျ့ပွနျသညျ။ အားရပါးရကွညျ့ရှုပွီးသကာလ ကောကျယူရနျ ဘိလပျမငျးသား စတိုငျဖွငျ့ ကုနျးလိုကျစဉျတှငျ တခွားသူကောကျသှားလသေညျ
တဈရာတနျတဈရှကျတှငျ ကြိနျစာအပွညျ့ရေးထိုးထားလသေညျ။ ထိုတဈရာတနျကို ကောကျမိသူမှာ ၁ဝရကျအတှငျး အသဆေိုးဖွငျ့သပေလေိမျ့မညျ။ သခြိုငျးကုနျးတှငျ အစီအမံမြားဖွငျ့ ပွုလုပျထားသော တဈရာတနျကို လှနျခဲ့သော နှဈငါးဆယျခနျ့က ပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး တဈရာတနျကို ကောကျယူမိပွီးသဆေုံးသူပေါငျး ၁၂ဝခနျ့ရှိပွီဖွဈသညျ။ သဆေုံးသူမြား၏ ၀ိညာနျမြားလညျး ထိုပိုကျဆံတှငျကိနျးအောငျးနလေသေညျ။
ကိုယျခန်ဓာတောငျ့တောငျ့တငျးတငျး ဖွငျ့ နီရဲပွီး ပွတျသားသောနှုတျခမျးအစုံဖွငျ့ ယောကျြားပီသလှစှာသောနီးသှေးသညျ ရှမျဗဲလားတှငျ သဈခှနကျရှာရနျထှကျလာခိုကျ လှနျစှာအိုမငျးလှပွီဖွဈသော အဖိုးအိုကွီးတဈဦးနှငျ့ ကိုယျခန်ဓာတောငျ့တငျးပွီး ဖွူဖှေးခြောမောလှသညျ့ မိနျးမပြိုတဈဦးတို့သညျ ရှမျဗဲလားသို့သှားရာလမျးတှငျ တဈရာတနျတဈရှကျကို ကောကျရနျပွငျနသေညျ။ အမှနျစဈစဈမှာ ထိုတဈရာတနျတှငျ သဈခှနကျရှိမညျ့နရောသို့ သှားရနျ မွပေုံရေးထားခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
အခွနေမေဲ့ပွီး ရနျကုနျသို့ မယောငျမလညျ ရောကျလာသော ကောငျလေးတဈယောကျ။ သူက မိမရှိဖမရှိ တဈကောငျကွှကျ။ အလုပျလုပျရငျး လကျဖကျရညျဆိုငျတှငျ စားပှဲထိုးနရေပွီး တဈနလြေှ့ငျ ၁ဝဝဝခနျ့သာရလသေညျ။ အလုပျပါးခိုကျ လကျဖကျရညျပါဆယျ သှားပို့စဉျ လမျး၌ တရာတနျတဈရှကျကို မွငျ၍ ကောကျရနျ ပွငျရာ နောကျဆုံးပျေါဇိမျခံကားပျေါမှာ ဆေးကြောငျးတကျနသေော ရှတေောငျကွားတှငျ နပွေီး လှနျစှာစမတျကသြညျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးက ရဗှေကျကို ကားဖွတျဖွတျမောငျးရာ သူ့ကိုဗှကျမြားစငျသှားသျောလညျး ကားကိုမရပျဘဲ ထှကျသှားလသေညျ။ ကားနံပါတျကို သူ့စိတျထဲတှငျ အလှတျကကျြလိုကျမိသညျ။ AA-786969 ။
ကတြျောတို့ တဈရာတနျဟိုမှာတှတေ့ယျ။ မကောကျရဘူး။ လူငယျတှဆေိုတာ အမွငျ့ကိုတကျလှမျးမှာဖွဈတယျ။ ရညျရှယျခကျြကောငျးကောငျးထားရမယျ။ အခြောငျမခိုရဘူး။ နညျးပညာမွငျ့လာတဲ့ ခတျေမှာ အင်ျဂလိပျစာ ကောငျးကောငျးတတျဖို့လိုတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိမိ လုပျအားခနဲ့ရတာကိုယူမှ ကွီးပှားတိုးတကျပွီး ထိပျဆုံးရောကျနိုငျမယျ။
ကမြတို့မိနျးမသားတှရေဲ့ ရဲရငျ့တညျကွညျမှုက အောကျသို့ကလြကျြရှိသော တဈရာတနျကိုပငျအမှုမထားခြေ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ထိုတဈရာတနျမှာ ကမြတို့ရပျတညျမှုနှငျ့ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာတရားကို ခွိမျးခွောကျမညျ့ ငှစေက်ကူတဈရှကျလညျး ဖွဈနိုငျသေးသညျ။
ရညျးစားဟောငျးဆိုတာ အောကျမှာကနြတေဲ့ တဈရာတနျတဈရှကျလိုပဲ တနျဖိုးမရှိပမေယျ့ တဈခါတဈလေ ကောကျခငျြမိတဲ့စိတျတော့ဖွဈနသေား။
မိုးတှရေတှေထေဲ တဈရာတနျ အာခံ ငါ့ကိုလာကွံ ကာပွနျ ပမာထနျ မကောကျတော့ဘူး ဘေးက ဘာအသံညာအသံ လာပွနျပွောမှာဆိုးလို့ ကိုယျ့အထာနဲ့ကိုယျငါပွနျမယျ မကနြေပျဖဘေု့တျပျေါစာခနျြ မငျးနတေဲ့ရှာပွနျ။
အိုးဝူးဝို ရေးရေ့ ရေးရေ့ တဈရာတနျ အိုးအိုး ဝူးဝူး ရရေ့ေ့ ရေးရေးရေ့ တဈရာတနျ ရေးရေးရေ့ တှတေ့ယျ ၀ိုးဝူးဝို အှနျးဟာာ ဟာာာ ရေ့ တဈရာတနျ တှတေ့ယျ ၀ိုးဝူးဝို့ဝို့ ရေးအေးဟေးဟေး ဟားဟားရေး ဝေးဟေးဟေး
လမျးမှာတဈရာတနျတဈရှကျတှတေ့ယျ။ ပိုကျဆံကိုကွညျ့လိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ဒါဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၅ဝကြျော ဟိုဘဝတုနျးက ရညျးစားဟောငျးတဈယောကျရဲ့ ပိုကျဆံဖွဈနိုငျဖှယျရာရှိတယျ။ စာတှလေညျးပါတယျ။ ကြိနျစာလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ။
ဟိုကျ…. တဈရာတနျတဈရှကျဟ.. ဒီတဈရာနဲ့ဆို ဇေ တဈပတျလောကျသောကျလိုကျရ သိပျကောငျးမှာပဲ .. လာလရေော့ ..
ဟာ… တဈရာတနျတဈရှကျ ဟီးဟီးဟီးဟီးဟီးဟီး တဈရာတနျကွီး ဟားဟားဟာားဟားဟားဟားဟား တဈရာတနျကွီးကှာ ဟီးးဟီးးဟီးးဟီးးး လမျးပျေါရောကျနတေယျ ငိငိငိငိ သူ့ဖာသာသူနတေဲ့ တဈရာတနျက လမျးပျေါရောကျလာတယျ ဟေးဟေးဟေး ဟားဟားဟား အသရေီရတယျဟေ့ တဈရာတနျကွီးလမျးပျေါရောကျနသေဟ ဟားဟားဟားဟား
ဒီတဈရာတနျက ငါ့ကိုသှေးတိုးလာစမျးနတောဟ။ဂေ့ .. အမယျ မငျးပဲငါ့ကို ဆှဲဆောငျမလား ငါပဲ သိက်ခာအကခြံပွီးကောကျမလား ဒီတညလုံးမငျးနဲ့ ငါပွိုငျမယျ။ တှပွေီ့လေ။
လမျးမှာတဈရာတနျတဈရှကျတှလေို့ ပိုငျရှငျကို ရှာပွီးပွနျပေးခဲ့တယျ။ သာဓုချေါပေးကွပါရှနျ။
လမျးတှငျပိုကျဆံမြားပွုတျကနြေ ဟု အစခြီကာ မူဗီတငျလိုကျပွီး ပွုတျကနြသေော တဈရာတနျတဈရှကျကို အဆုံးသတျရိုကျပွပလေိမျ့မညျ။
ငါ့ဘဝက တဈရာတနျတဈရှကျလိုကာ တနျဖိုးမဲ့တာတောငျ ငါ့ကိုအမွဲရနျရှာတတျသလိုမြား ဖွဈနရေငျ ကံကွမ်မာရဟတျပွနျလညျလာမှ မငျး… ဖနျတဈရာအတှကျတှေး…. တကယျတော့ကတြျောတို့က ကွငျဖကျတှပေါဗြာ သူမကမနနျေိုငျ လငျထှကျကာရှာ ငါကို မမွငျတတျတာမြား ခုတော့ နငျတာ့တာပွ …။
တဈရာတနျတဈရှကျ ကောကျလညျးကောကျခငျြတယျ သူမြားမွငျပွီးရီမှာလညျးကွောကျတယျ
ဆကျပွောစမျးပါဦး တဈရာတနျတဈရှကျက ဘကျဈကားစီးရငျ အသုံးဝငျတဲ့အကွောငျးလေး
ကတြေျာ့မှာ အိပျမကျတဈခုရှိတယျ တဈရာတှအေမြားကွီး ကောကျတှစေ့ရေမယျ။
တဈရာတနျကိုတောငျ လှငျ့ပဈခဲ့တဲ့ မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ ယဉျကြေးမှုဟာ အတျောပြောကျဆုံးနပွေီ။ ဒီလိုတဈရာတနျဟာ အရငျတုနျးက ဘယျသူမှ ပဈမခခြဲ့ဘူး။ ဒါမြိုးပဈခတြယျဆိုတာ ဒီမိုကရစေီအမညျခံပွီး လုပျခငျြတာ လုပျတယျဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ ဒါမြိုးလကျခံလို့မရဘူး။
ငါတို့အရိုးစညျးရိုးထိုး Blah Blah
#တရာတနျ #တဈရှကျ #လမျး #ကောကျရ #ပြျောနေ #မုနျ့ဝယျ #စား #ကောငျး #တဈယောကျတညျး
စမီးတရာတနျတရှကျကောကျရလို့ နောကျတခါ တဈသောငျးတနျကောကျရပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးသှား မတောငျးပေးရငျ unမှာနျော realလေးတှဆေိုမနျ့ကွ။ မှမှ
ဒီတဈရာတနျကို ရှယျပွီး လိုခငျြသောပမာဏရေးပါ။ တလအတှငျးဝငျမညျ ။ မှတျခကျြ သိနျးတဈရာမကြျောရ။
တကယျ​​တော့ ၁ နှဈ​ရှိပွီး ဘာမှ မတိုးတကျ​တာလဲ မ​ဟွနေဲ့​လေ .​ကွညျ့​ပါလား . အခုလို ၁၀၀ တနျ​ကတြာ​တောငျ​ ဘယျ​သူမှမ​ကောကျ​ကွဘူး .ဒါဟာလဲ အရငျ​အစိုးရမ​ကောငျးခဲ့လို့ ကတြာပဲ. ဒါမဲ့ ကြှနျ​​တျော​တို့အ​နနေဲ့ ၃ လအတှငျး ရ​အောငျ​​ကောကျ​ပွပါမယျ​ . ဒီထကျ​မွနျ​မွနျ​​ကောကျ​ပွနိုငျ​မယျ့​ လူရှိရငျ​ သူတို့ကို​ကောကျ​ခှငျ့​​ပေးသှားမှာပါ .